Video: Kacaanka Warbaahinta Bulshada 3 | Martech Zone
Video: Kacaanka Warbaahinta Bulshada 3
Arbaco, Juun 13, 2011 Khamiista, Oktoobar 27, 2011 Douglas Karr
Sababo jira awgood, kama daali doono daawashada cajaladahaan cajiibka ah Xirfadaha bulshada. Noocaan ugu dambeeyay ee fiidiyowga Socialnomics waxaa la daabacay Juun, 2011. Socialnomics waxaa aasaasey Erik Qualman iyadoo ujeedadu tahay bixinta tirakoobka Bulshada & Mobilada, Daraasadaha & Layaabka. Hubso inaad fiiriso barta Erik. Waxaan rajeynayaa inaan ka helo Show Teknolojiyada Suuq geynta maalin maalmaha ka mid ah!
Waan ku riyaaqay… inkasta oo, sida mid ka mid ah faallooyinka la tilmaamayo, ay si xun u cambaareeyeen saddexda xiddigood ee 'Star Wars' iyaga oo si qaldan u higgaadiyay Darth Vader.
Naqshadeynta Mashiinka Raadinta Blog